September | 2017 | Indrenionline.com | Page 4
Monthly Archives: ८ आश्विन २०७४, आईतवार ११:५३
नवलपरासी , ८ असोज । नेपाली काँग्रेसका नेता एवंम् पूर्व गृह राज्य मन्त्री देवेन्द्रराज कण्डेलले नेपालमा सञ्चार जगतको महत्पूर्ण भुमीका रहेको बताउनुभएको छ । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रिय सदस्य समेत रहनुभएका कण्डेलले हरेक ऐतिहासीक परिवर्तनको अवस्थामा नेपाली पत्रकार र नेपाली पत्रकारीताको महत्वपुर्ण योगदान गरेको चर्चा गर्नुभयो । नवलपरासीको भुजहवामा त्रिबेणी सञ्चार मञ्च , न्युज एट नेपाल डट कम अनलाईन , अनलाईन ...
बाढी पीडितको सहयोगार्थ दशैं विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम हुने
घोराही,७ असोज । बाढी पीडितहरुको सहयोगार्थ दशै विशेष सास्कृतिक कार्यक्रम हुने भएको छ । विजयादशमी तथा दिपावलीको अवसरमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१४ पहली मन्दिरमा यहि असोज दश गते सांस्कृतिक कार्यक्रम हुने भएको हो । वन वे फिल्मस्को आयोजना तथा दिनेश विश्वकर्माको प्रायोजनमा दशै विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम हुने भएको हो । उक्त कार्यक्रममा मोडेल रिना थापामगर,बुद्धविर थापा,लोकगायिकाहरु सुशीला गौतम, मधु क्षेत्री, अमृता लामीछाने,मधुसुदन ...
यसरी मनाइयो राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूहको २१ औँ वार्षिकोत्सव ( फोटो फिचर )
काठमाडौँ, ६ असोज स् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको प्रमुख आतिथ्यमा राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूहको २१ औँ वार्षिकोत्सव समारोह सम्पर्न भएको छ । यहाँ आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले सञ्चार क्षेत्रको विकास भएमात्र मुलुकको विकास हुने भन्दै सञ्चारमैत्री वातावरण निर्माणका लागि मन्त्रालय लागिपरेको बताउनुभएको हो । “सूचना प्रविधिको विकासका कारण संसारका धेरै मानिसहरु धनी बनेका छन् र धेरै देशले विकास गरेका ...
जनता र प्रहरी मिले यस्तो पनि गर्न सकिने रहेछ ..
भाद्र ६, काठमाडौँ । गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले अब जनता र प्रहरी मिलेर सुचना आदान प्रदान गर्दै, गुण्डागर्दी, मानव तस्करी, चोरी, डकैती र भ्रष्टाचार अनत्य गर्ने बताउनु भयो । शुक्रबार काठमाडौँको भृकुटीमण्डपस्थित पुलिस क्लबमा आयोजित ‘प्रहरी हाम्रो टोलमा’ अभियानको घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दैै मन्त्री शर्माले सो कुरा बताउनु भएको हो । जनतालाई कुनै पनि समस्या पर्दा उनीहरुले एक नम्बरमा सम्झिनेनै ...
यसरी मनाइयो ३८औँ सामाजिक सेवा दिवस
काठमाडौँ ६ असोज । समाज कल्याण परिषदले हरेक वर्ष मनाउँदै आएको सामाजिक सेवा दिवश यस वर्ष पनि धुमधामका साथ सम्पन्न गरेको छ । यही असोज ४, ५ र ६ गते तीन दिनसम्म मनाइएको उक्त दिवशको अन्तिम दिन शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको प्रमुख आतिथ्यमा ३८औँ राष्ट्रिय सामाजिक सेवा दिवश समारोह सम्पन्न भयो। समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गैरसरकारी संस्थाहरूको ...
गृहमन्त्रालयले गर्‍यो देशभर यस्तो कार्यक्रमको सुरुवात
आर.के. शीतल दाङ, ६ असोज । गृह मन्त्रालयले दाङ लगायत देशैभर आजदेखी नयाँ कार्यक्रम सुरु गरेको छ । मन्त्रालयले देशभर एकैसाथ एकै समयमा ‘शान्ति सुरक्षा र शुसासन जनमैत्री प्रहरी र प्रशासन’ कार्यक्रम सुरु गरेको हो । यो कार्यक्रमको दाङमा पनि सुरु गरिएको छ । आज शुक्रवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ र जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरि अभियानको सुरु ...
रामेछापमा बस दुर्घटना हुँदा तीनको मृत्यु
इन्द्रेणी संवाददाता रामेछाप ६ असोज । दशैं तिहार जस्ता महान चाड नजिकिदैं गर्दा रामेछापमा भने दशा लागेको छ। रामेछापको बाबियाखर्कमा यात्रुबहाक बस दुर्घटना भएर बिपत परेको हो । बस दुर्घटना हुँदा ३ जनाको मृत्यु भएको छ भने १४ जना घाइते भएका छन् । रामेछापबाट काठमाडौं आउँदै गरेको बा. २ ख ६३७२ नम्बरको बस बाबियाखर्कमा दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ । ...
तुलसीपुरको दोघरेमा पौने करोडको लगानीमा होम डेकोर संचालन
तुलसीपुर,६ भदौ । दाङको तुलसीपुरमा पौने करोडको लगानीमा होम डेकोर संचालनमा आएको छ । युवा व्यवसायी प्रमोद बस्नेतले तुलसीपुर ९ दोघरेमा पौने करोडको लगानीमा पब्लिक होम डेकोर एण्ड सप्लायर्स संचालनमा ल्याउनुभएको हो । उहाँले अत्याधुनिक र नयाँ डिजाइनका होम डेकोरका समाग्री बिक्रि बितरण सुरु गरेको बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । पब्लिक डेकोरमा बक्स पलङ, काठ तथा स्टिलका दराज,सोफा,पर्दा,डाइनिङ टेबल ,पर्दा लगाएतका ...
जनतालाई समस्याबाट पार कांग्रेसले लगाउछ : नेता पौडेल
माधव बेल्वासे चन्द्रौटा असोज ५ । जनतालाई समस्याबाट पार नेपाली कांग्रेसले मात्र लगाउने नेपाली काग्रेस भएको वरिष्ट नेता रामचन्द्र पौडेलले वताए । जनताको हित र अधिकारको लागि काम गर्ने पाटी नेपाली काँग्रेस भएको बरिष्ट नेता राम चन्द्र पौडेलले दावि गरे । एमाले र माओवादीले अनावश्यक नारा लगाएर फसाएको बताउदै नेपाली काग्रेस सारा नेपालीको हितमा काम गर्ने पाटी भएको उहाले जिकिर गरे । ...
सरकारको साँचो माओवादी संग छ : प्रचण्ड
माधव बेल्वासे चन्द्रौटा ५ असोज । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिलेको सरकारको साँचो माओवादी संग रहेको वताएका छन् । माओवादी केन्द्रको लामो समय सम्मको सर्घषले सविधान जारी गरि कार्यनव्यान को अवस्थामा ठुलो कसरत माओवादीले नै गरेको धारण व्यक्त गरे । कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा आयोजित विशाल जनसभा तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रम लाई सम्वोधन गर्दै प्रचण्डले महिला दलित मजदुरहरु लाई नेता वनाई ...